मध्यरातमा सरकार र अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच भयो यस्तो सहमति, हेर्नुस् ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मध्यरातमा सरकार र अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच भयो यस्तो सहमति, हेर्नुस् !
admin October 10, 2020 समाचार	0
काठमाडौं । सरकार र अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच मध्यरातमा ८ बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डा. केसी र सरकारी पक्षबीच ८ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनाली र डा.केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।